ဘဝမှတ်တိုင်: Huawei Font.apk
Hauwei ဖုန်းများအတွက် Root လုပ်စရာမလိုပဲ မြန်မာစာ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
G-730 လို မြန်မာစာတွေလွဲနေတာတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် မြန်မာစာမှန်စေတဲ့ Hauwei Mynamar Font.apkလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအသုံးပြုပုံအသုံးပြုနည်းကတော့ ပြောပြစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ် Install လုပ်ပြီး တစ်ခါတည်းတန်းသုံးနိုင်မှာ မို့လို့ပါ Restart ချဖို့တော့ မမေ့နဲ့ပေါ့ဗျာ..........
Download : (6.44)MB
Minokekar (ဘီလူးကျွန်းသားလေး) (1) or
Minokekar (ဘီလူးကျွန်းသားလေး) (2)
အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါက okekarkyawboyfriend@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 6/22/2014 05:19:00 pm
စာအမျိုးအစား နည်းပညာ, ဖုန်းဆော့ဝဲ
Kaunglaynge 89 13 January 2016 at 23:09
Facebook မှာ မြန်မာ နာမည်​​တွေမမြင်​ရဘူး ပြီး​တော့ beetalk အဆင်​မ​ပြေဘူးဖြစ်​​နေတယ်​
Kaunglaynge 89 13 January 2016 at 23:10
အဆင်​​ပြေပြီး root မလိုတဲ့ app ​လေးလုပ်​​ပေးပါဦး
★★3G WiFi Connection Mode Version : 1.5 Apk (All A...
Facebook v13.0.0.0.8 For Android
Huawei G730 အတွက် မြန်မာ Font Installer V2
Huawei G730 မှာ မြန်မာလို မမြင်ရတဲ့ မြန်မာ apk တွေ...
ZawGyi font for Blackberry 8
Root Apk များ စုစည်းမှု (No Need PC)
Note2 အန်ဒရိုင်း(v4.3,v4.4.2)ကို root ဖောက်မယ်
ဖုန်းကနေ မြန်မာစာတန်းထိုးရှပ်ရှင်ကားများ ထည့်ပြီြး...
Root မလို မြန်မာစာ ( By - Kyaw Ko Ko )
C8816 - C8816D Bootloader Code မတောင်းဘဲ Rootနည်း
iOS 7.1.1 Compatible Jailbreak Apps and Tweaks
Offline/Online Reader Apk ရေးသားနည်းစာအုပ်.PDF
iOS 7.1.1 Untethered Jailbreak Tool ထွက်ရှိ
iOS 7.1.1 မှာမြန်မာ Font နဲ့ မြန်မာကီးဘုတ် ထည့်သွင...
iOS 7.1.1 ကို Untethered Jailbreak လုပ်နည်း [Step ...
Android ထုတ်ကုန်တစ်ခု၏ Boot Animation ကို ပြောင်းလ...
♪ ဖုန်း Hardware Power ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်း ♫
♪ မြန်မာဇာတ်ကားများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ကြည့်ရှု...
Advanced Download Manager Pro v.3.5.7 For Android
♪ မသုံးစေချင်တဲ့ Application တွေကို ပိတ်ထားပေးမယ့်...
Flash Bink .Apk
I Font အတွက် အသုံးပြုနည်းလမ်း
ဆိုင်သမားတွေအတွက် ဆောင်ထားသင့်သော Mobogenie tools
ဖုန်းအတွက် ပြီင်္းပြည့်စုံသော Key များ
Battery Doctor (Battery Saver) v4.9.3 Apk
Facebook for Android v13.0.0.0.2 For Android
♪ GSM , WCDMA များအတွက် အင်တာနက်လျှောက်ရန်သိထားသင်...
Asus Zenfone5 နဲ့ Oppo ဖုန်းတွေကို Root လုပ်နည်း
Asus Zenfone4ကို Root Acess ရယူနည်း
မြန်မာ Phone Number နဲ့ Facebook လော့ဖြည်နည်း
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 4.4.2 ကို Root လုပ်ရန်အ...
iOS 8 beta2တွင် Zawgyi Font ကို မြန်မာလို ရေးဖတ်...
♪ ဖုန်းအတွက် Antivirus ကောင်းကောင်းလေး - Security ...
Flashlight Notification For Viber
♪ Android Tuner v1.0.1APK Update (18-June) ♫
Huawei ဖုန်း၇၀ကျော်Root လုပ်နည်းFirmwareတင်နည်း ပြ...
Root မရ ပဲ တင်းခံ နေ တဲ့ android ဖုန်းတွေအတွက် roo...
Gmail, Facebook နှင့် အခြား ဝက်ဘ်ဝန်ဆောင်မှုများကို...
Personal Diary Apk
အစွမ်းထက် VRoot ဗားရှင်းသစ် VRoot 1.7.8.7753 For W...
Huawei P7-L07 မြန်မာစာပါတဲ့ Firmware လေးပါ
Xperia Firmware များ (2010 to 2014 )
ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲတွေကို ဖုန်း နှင့်တိုက်ရိုက်ကြည်...
USB Debugging ပိတ်မိပြီး Phone Security Lock ကျနေသ...
ဖေ့ဘုတ်မှာသင့်ချစ်သူအွန်လိုင်းတက်လာရင် သင့်ထံ အသံေ...
ဘောလုံးပွဲတွေကို ဖုန်းကနေ တိုက်ရိုက်ကြည့်ချင်ရင်
♪ Romantic ဆန်ဆန်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ချင်သူများအတွက်...
## New Zawgyi & Zawgyi-one Flipfont ##
Android Models ပေါင်း 10000 ကျော်ကို Root လုပ်ပေးန...
မလာစေချင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်/Message တွေကို block ထားဖိ...
HTC "Bootloader Unlock" One Click Tool V 0.2.0.181...
Samsung ဖုန်းတွေအတွက် Original မြန်မာ Keyboard ထည်...
IM+ Pro V 6.6.2 Last Version For Android
Video ခိုးရိုက်ဖို့ Secret Video Recorder Pro V 18...
Huawei Y535-C00 version 4.3 ကို Root လုပ်စရာမလိုပဲ...
✏ Galaxy S4 GT-I9500 Android 4.4.2 KitKat Official...
✏Nokia X ဖုန်းကို Root ဖောက်မယ်၊CWM တင်မယ်၊Play St...
IOS7အတွက်
G730-C00 အတွက် Network Unlock & Myanmar Font ကို b...
LEDBlinker Notifications v5.8.3 For Android
IOS 7.1.1 & IOS 8 Beata တွင် Myanmar Font သွင်းနည်...
ရန်ကုန် - မန္တလေး အမြန် လမ်းမကြီး ကနေ အမြဲတမ်း ခရီး...
မည်သည့် Android Version ကိုမဆို မြန်မာစာ 100% မှန်...
မြန်မာဖောင်.နှင်. ကီးဘုတ်သွင်းလို.အဆင်မပြေဘူးလို. ...
My Backup Pro v4.1.0 for android
MX Player Codec (ARMv7 NEON) 1.7.27 Apk (All Andro...
တယ်လီနောဆင်းမ်ကတ်များ ၁၅၀၀ ကျပ်ဖြင့် စက်တင်ဘာလတွင်...
IOS7(IOS 7.0 To IOS 7.0.4) ကို Jailbreak လုပ်နည်...
iPhone4User တိုအတွက် iOS 7.1 tethered jailbreak ...
✏ မြန်မာဖောင့် ပါဝင်လာပြီးသားဖုန်းမှာ မြန်မာစာစနစ်...
Android ဖုန်း 4.0အကျော်ဖုန်းတွေ မြန်မာစာမှန်အောင် ...
Nokia X နှင့် မြန်မာဖောင့်
Smart Booster Pro v3.6.140504p APK
Cinema FV-5 v1.23 APK
Snap Camera HDR v4.5.2 APK
Sleep as Android v20140603 (FULL) APK
♪ ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ၀င်းဒိုးဖုန်းဖြစ်လာသည့် Wistron ...
♪ Samsung က Galaxy Tab4Nook ကို ကြေညာ ♫
Emotion UI Fonts Installer -Huawei ဖုန်းအများစုတွင...
Samsung Glaxy Grand2SM-G7102 ကို Root နည်း
♪ Android ဖုန်းပေါ်မှာ ဘတ္တရီ သက်တမ်း အချိန်ကြာကြာသံ...
Xperia V LT-25i Root on Bootloader unlock
Viber မှ Chat, Call, Contact များကို Backup လုပ်ထာ...
MoboPlayer Pro v1.3.280 Apk
Root Tools နဲ့ဖောက်ရခက်တဲ့ i mobile iQ 6.3 ကို Roo...
SONY XPERIA FONT INSTALLER v1.0.4
SAMSUNG 4.3 တွေ warranty မပျက်အောင် root မယ်
Samsung ဖုန်း Version 4.3,4xx တွေမှာ (ျ,ု) တွေ...
How to ROOT LENOVO A369i + မြန်မာ Font & All Andro...
ဆရာကိုသူရိန်စိုးဖန်တီးထားသော All In One Huawei Roo...
Android 1.6 မှ 4.4.2 ကို Root လုပ်မယ် ကွန်ပျူတာမလိ...